Wafdi ka socda Koonfur Galbeed oo gaaray Boosaaso. – DMS
HomeWararkaWafdi ka socda Koonfur Galbeed oo gaaray Boosaaso.
Wafdi ka socda Koonfur Galbeed oo gaaray Boosaaso.
6th July 2019 Zamiir M Ali
Xubnaha Guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee ka kala socday Xildhibaanada golaha shacabka iyo maamulka Koonfur galbeed oo Maalmahaan ku sugnaa Magaalada Garoowe ayaa gaaray magaala xeebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa halkaasi kusoo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Dawladda Puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi.
Dhinaca kale xubnaha gudiga ayaa kulan la qaatay Madaxda Dowlad Puntland, waxaana ka mid ahaa wasiirka Dekadaha,Wasiiru Dowlaha wasaaradda Arrimaha gudaha,Guddoomiyaha Gobolka Bari iyo sidoo kale taliska qeybta booliska,waxaana kulanka inta uu socday aad looga hadlay dadka xabsiyada ku xiran iyo dembiyada loo heysto iyo sidoo kale in la kala saaro oo si deg deg dadka xiran maxkamad loo horkeeno si dembiilayaasha ay garsoor cadaalad ah u helaan kuwii dembi lagu waayana dib xoriyadooda loo siiyo.